ဘဲခေါင်းစိမ်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝမ်းဘဲနှင့် မျိုးစဉ်တူ၊ မျိုးရင်းတူနှင့် မျိုးရင်းခွဲတူ အခြားဘဲတစ်မျိုးမှာ ဘဲခေါင်းစိမ်းဖြစ်သည်။ ဘဲခေါင်းစိမ်း၏ အလျားမှာ ၂၃ လက်မ ဖြစ်သည်။ ဘဲခေါင်းစိမ်းဟုခေါ်ကြသည့်အတိုင်း ဦးခေါင်း၏ အရောင်သည် ကိုယ်အရောင်နှင့်မတူဘဲ အစိမ်းရောင်လွှမ်းလျက်ရှိသည်။ ဘဲခေါင်းစိမ်းအဖို၏ အမြီးအလယ်ရှိ အမွှေးလေးချောင်းသည် အပေါ်သို့ တွန့်လိမ်လျက်ရှိသဖြင့် အခြားဘဲများနှင့် ခြားနားသည်။ ဘဲခေါင်းစိမ်းအဖို၏အရောင်သည် များသောအားဖြင့် မွဲခြောက်ခြောက်ဖြစ်ပြီးလျှင် လည်ပင်းပတ်လည်တွင် အဖြူရစ်ရှိသည်။ ဘဲခေါင်းစိမ်းအမ၏အသံသည် ကျယ်လောင်၍ ကြမ်းတမ်းသော်လည်း အဖို၏အသံမှာ ခတ်အုတ်အုတ်ဖြစ်သည်။
ဘဲခေါင်းစိမ်းများကို ရေကန်များ၊ ထုံးအိုင်များနှင့် အသီးအနှံ စိုက်ပျိုးခင်းများရှိသည့် ရေဝပ်ဒေသများတွင် စုံတွဲဖြစ်စေ၊ အုပ်ကလေးများဖွဲ့၍ဖြစ်စေ တွေ့ရသည်။ များသောအားဖြင့် ဘဲခေါင်းစိမ်းသည် ရေမျက်နှာပြင်တွင်သာ ကျက်စားလေ့ရှိသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် အစာအတွက် နှစ်ပေ၊ သုံးပေမျှ ရေတွင်ငုပ်လေ့ရှိသည်။ ရေမှထ၍ ပျံရာတွင် တည့်တည့်မတ်မတ် ထလေ့ရှိသည်။ မြေကြီးပေါ်၌ လမ်းလျှောက်ရာတွင် သာမန်ဝမ်းဘဲထက်ပို၍ ကောင်းမွန်စွာ လျှောက်နိုင်သည်။ ဘဲခေါင်းစိမ်းအုပ်များသည် စားကျက်သို့ဖြစ်စေ၊ စားကျက်မှဖြစ်စေ အချိန်မှန်မှန် ပျံသန်းလေ့ရှိကြသည်။ ဘဲခေါင်းစိမ်း ပျံသန်းရာတွင် လျင်မြန်ပြီးလျှင် ထူးခြားသည့်လှုပ် ရှားမှုရှိသည်။ အတောင်များကိုခတ်ရာတွင် မမြန်လှသော်လည်း လေချွန်သံ ပေါက်သည်။ အစာရှာရန်ပျံသန်းစဉ်တွင် ပုံသဏ္ဌာန်ထား၍ ပျံသန်းလေ့မရှိ ကြသော်လည်း နယ်ပြောင်းကြသောအခါမှာမူ ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ဖြစ်စေ၊ အမြဲသဖြင့် ပြောင်းလဲလေ့ရှိသော ရွှေရွှေအတန်းလိုက်ဖြစ်စေ ပျံသန်းလေ့ရှိကြသည်။
ဘဲခေါင်းစိမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြဲနေထိုင်သော ငှက်မျိုးမဟုတ်ချေ။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အနီးဆုံး ဘဲခေါင်းစိမ်း၏ သားပေါက်သောနေရာများမှာ တိဗက်နှင့် ကသ္မီယပြည်တို့ဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီ၌ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းသို့ အုပ်ကလေးများဖွဲ့၍ မှန်မှန်လာပုံရသည်။ ချင်းတွင်းအထက်ပိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတို့တွင်လည်း ဘဲခေါင်းစိမ်းကိုတွေ့ရသည်။ ဘဲခေါင်းစိမ်းသည် ကြောက်တတ်သဖြင့် သေနတ်သံကို ကြားသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ရှေးဦးစွာပျံသန်းသွားလေ့ရှိသည်။ ဘဲခေါင်းစိမ်းကို သတ္တဗေဒ(ပါဏဗေဒ‎)အလိုအားဖြင့် အနပ်ပလက်တိုင်းရင်းချား ပလက်တိုင်းရင်းချာ ဟုခေါ်သည်။ 
↑ "Anas platyrhynchos (Common Mallard, Mallard, Northern Mallard)" (2016). IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘဲခေါင်းစိမ်း&oldid=713562" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။